मार्सी वाला , दुर्गा प्रसाईको छाडा गाली । – कर्णाली 24 डट कम
मार्सी वाला , दुर्गा प्रसाईको छाडा गाली ।
Karnali 24१२ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०४:४८
काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीका मिडिया संयोजक प्रितम सुवेदीलाई दुर्गा प्रसाईंले टेलिफोनमा धम्की दिएका छन्।
झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईंले सुवेदीलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिएका हुन्।
सुवेदीले एउटा विश्व विद्यालयले पाँच मेडिकल कलेजभन्दा बढीलाई सम्बन्ध दिने व्यवस्था कानुनविपरीत भएको र काठमाडौं विश्वविद्यालयले चोर बाटोबाट बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिएको बताएका थिए।
त्यसको उत्तरमा आक्रोशित हुँदै प्रसाईंले भनेका छन्, ‘तेरो बाउले दिन्छ बैंकको ब्याज। तेरो आमाले तिर्छ। तेरो बहिनीले तिरिदिन्छ।’
सुवेदीले शीष्ट हुँदै यस्तो अपशब्द बोल्ने भए फोन राख्नुस् भन्दा उल्टै प्रसाईंले मैले धेरै खपे भन्दै धम्की दिएका छन्। ‘तँ इन्जिनियर। तँसँग डबली खोल्ने पैसा कहाँबाट आयो? तँ आफ्नो ठाउँमा बस्। नहाँस्,’ प्रसाईंले भने।
उनले मापदण्डको कुरा उठाउँदा सुवेदीले तपाईंले मापदण्ड पूरा गरेको के आधार छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। फेरि आक्रोशित हुँदै प्रसाईं भन्छन्, ‘तँ को होस् मापदण्ड भन्नलाई। त कानुन, राज्य होस् कि? मैले संविधानमा रहेर देशमा उद्योग धन्दा खोल्न पाउँछु। तँ मलाई चोरबाटो भन्ने। मेरो अगाडि परिस् भने म तलाई चोरबाटो देखाइदिन्छु। तेरो बाउआमा राखेर तँसँग कुरा गर्छु। तेरो बाउआमा काँ छन्? त धेरै नबोल भाइ। भेटे भने तेरो तीन इन्च छाला सर्ने गरी हानिदिन्छु। साला डाँका।’
कोरोन बिमा ६० हजार ५८७ जनाले भुक्तानी पाए, यस्तो व्यक्तिले नपाउने।
२ बैशाख २०७८, बिहीबार ०८:१८
सांसद पद गुमाएकाहरुको माओवादी केन्द्र छाडि एमालेमा फर्केका कारण पुन मन्त्री पद उपहार।
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ०९:४०
१ असार २०७८, मंगलवार ०७:०२
गुण्डा नाईकेलाई मन्त्री पद, पत्रपत्रिका बाट साभार।
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०९:५६
स्वास्थ्य मन्त्रिको सम्पति : काठमाडौंसहित १४ ठाउँमा जग्गा, २२ तोला सुन।
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:४९
बुद्ध एयर प्रकरण : पाइलट एजी शेर्पा ‘दो’षी’, ३ महिना निलम्बन १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०४:४८
पोखरामा स्कुल बसबाट ख’सेर ८ वर्षीय विद्यार्थीकाे मृ’त्यु १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०४:४८
“नाे एमसीसी” भन्नेहरुनै दैनिक १५ सयले डिभी भर्नकै लागि राहदानी बनाउंदै(भिडियो सहित ) १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०४:४८